डेनमार्कमा अरोरा बोरलिस Absolut यात्रा
दानियल | | डेनमार्क
La डेनमार्कमा उत्तरी लाइट्स यो एक प्राकृतिक तस्विर हो जुन हजारौं दर्शकहरूलाई हरेक वर्ष आकर्षित गर्दछ। यसको आकाशमा बाढी ल्याउने अद्भुत र its्गहरू बत्तीहरू उस्तै हुन् जुन अन्य स्कान्डिनेभिया देशहरू जस्तै नर्वे, स्विडेन वा फिनल्याण्डमा देख्न सकिन्छ। यद्यपि धेरैले विश्वास गर्दछन कि बत्तीहरू जुन डेनमार्कको आकाशमा देख्न सकिन्छ विशेष गरी सुन्दर छ।
यद्यपि यो आश्चर्य प्रत्येक दिन देख्न सकिदैन। डेनमार्कमा उत्तरी लाइटहरू केवल वर्षको एक निश्चित समयमा मात्र अवलोकन योग्य हुन्छन् र प्रत्येक दिन पनि होइन, किनकि तिनीहरूको दृश्यता निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं डेनमार्कको यात्राको लागि पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ र यो आश्चर्यको आनन्द लिन सक्षम हुनुभयो भने, तपाईंले एउटा यस्तो दर्शन लिनुहुनेछ जुन तपाईंले कहिल्यै बिर्सनुहुन्न।
1 उत्तरी उज्यालो के हो?
2 डेनमार्कमा कहिले उत्तरी उज्यालोहरू हेर्ने?
3 डेनमार्कमा उत्तरी लाइटहरू अवलोकन गर्न ठाउँहरू
4 कसरी उत्तरी लाइट्स फोटो लिन
उत्तरी उज्यालो के हो?
अरोरा बोरलिस (पोलर अरोरा पनि भनिन्छ) एक अद्वितीय वायुमण्डलीय घटना हो जुन आफैमा देखा पर्दछ रातको आकाशमा चमक वा ल्युमिनेसेन्स। दक्षिणी गोलार्द्धमा यसलाई दक्षिणी अरोरा भनेर चिनिन्छ।
प्राचीन समयमा यो विश्वास गरिन्छ कि यी रहस्यमय दिव्य ज्योतिहरूको ईश्वरीय उत्पत्ति छ। उदाहरणका लागि चीनमा उनीहरूलाई "आकाशका ड्रेगनहरू" भनेर चिनिन्थ्यो। सत्रौं शताब्दीदेखि मात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट घटनाको अध्ययन गर्न थाले। हामी हालको सर्त "अरोरा बोरलिस" लाई फ्रान्सेली खगोलविद्को owणी छौं पियरे ग्यासेंडी। एक शताब्दी पछि, घटनाको पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रसँग जोड्ने पहिलो ब्रिटिश थियो एडमंड हली (उही एक जसले हेलीको धूमकेतुको कक्षा गणना गर्‍यो)।
डेनमार्कमा उत्तरी लाइट्स
आज हामीलाई थाहा छ उत्तरी उज्यालोहरू चार्ज हुन्छ जब चार्ज सौर कणको इजेक्शनको साथ टकराउँदछ म्याग्नेटोस्फीयर पृथ्वीको, एक प्रकारको ढाल हो जुन दुबै ध्रुवबाट चुम्बकीय क्षेत्रको रूपमा ग्रहलाई घेर्दछ। सूर्यको किरणबाट चार्ज गरिएको कणको साथ वायुमण्डलमा वायु कणहरूबीचको टक्करले उनीहरूलाई उर्जा र प्रकाश उत्सर्जन गर्दछ। यसले सिर्जना गर्दछ हरियो, गुलाबी, निलो र बैजनी को जीवन्त शेडहरू आकाशमा नाच यो "दुर्घटना" पृथ्वीको सतह १०० देखि kilometers०० किलोमिटर माथि उचाइमा हुन्छ।
डेनमार्कमा कहिले उत्तरी उज्यालोहरू हेर्ने?
यद्यपि तिनीहरू वर्षभरि देखा पर्दछ, उत्तरी उज्यालोहरू निश्चित समयमा मात्र देखिन्छन्। डेनमार्कमा उत्तरी लाइटहरू हेर्न उत्तम समय हो अप्रिल र सेप्टेम्बर महिना बीच। वर्षको यस समयमा, उत्तरी गोलार्ध गर्मी, रातहरू गाढा र आकाश कम बादल छ।
साँझ र सूर्यास्त पछि जब यी जादुई बत्तीहरू देखा पर्न थाल्छन्। उत्तरी लाइट्स (डेनिसलाई चिनिन्छ Nordlys) विदेशीहरूलाई अचम्मित पार्नुहोस्, विशेष गरी तिनीहरू जो अन्य अक्षांशबाट आएका छन् र यस घटना पहिले देखेका छैनन्।
दुर्भाग्यवश, आँधीबेहरी दिनमा वा सोमबार बिहान हुँदा उत्तरी बत्तीहरूको जादू देख्न लगभग असम्भव छ। यदि त्यहाँ आँधीबेहरी छ भने, तपाईं उत्तरी लाइट्स देख्न सक्नुहुन्न, आकाश यति उज्यालो छ कि यसको रंगहरु को लागी मानव आँखा प्रतिबिम्बित गर्न को लागी।
अर्कोमा timelapse भिडियो, भित्र चित्रित लिम्फजर्ड २०१ In मा, तपाईं यस प्राकृतिक दृश्यको पूर्ण बलको कदर गर्न सक्नुहुन्छ:
डेनमार्कमा उत्तरी लाइटहरू अवलोकन गर्न ठाउँहरू
यहाँ केहि राम्रा ठाउँहरू छन् डेनमार्कमा उत्तरी लाइटहरू हेर्नका लागि:
फारो टापु। उत्तरी अटलान्टिक र नर्वेली समुद्री बिचको अवस्थित यस द्वीपसमूहमा त्यहाँ कमै प्रकाश प्रदूषण छ, जुन उत्तरी लाइट्सको सम्पूर्णतामा चिन्तन गर्न स्पष्ट र स्पष्ट आकाशको ग्यारेन्टी हो।
ग्रेन यो एक सानो प्रायद्वीप हो जुन मुख्य भूमि डेनमार्कको उत्तरी उत्तरमा अवस्थित छ। अक्षांशको साथसाथै कुन कुराले यस स्थानलाई एक राम्रो अवलोकन पोइन्ट बनाउँछ मानव बस्तीबाट कृत्रिम प्रकाशको अभाव।
Kjul स्ट्रेन्ड, सहरको बाहिरी भागमा एक लामो समुद्र तट हर्टशल्स, जहाँबाट धेरै फेरीहरू नर्वे प्रस्थान गर्दछन्।
सेम्से, एक टापु कोपेनहेगनको पश्चिममा अवस्थित छ र यसको उत्कृष्ट संरक्षित प्राकृतिक वातावरणको लागि प्रसिद्ध हो। यो एक उत्तम हो डेनमार्क को प्राकृतिक क्षेत्रहरु.
कसरी उत्तरी लाइट्स फोटो लिन
डेनमार्कमा अरोरा बोरलिसको गवाही दिने प्रायः सबैले तिनीहरूको फोटोग्राफिक वा भिडियो क्यामेराको साथ घटनाको सुन्दरता लिन खोज्छन्, यसको जादू सदाको लागि कैद गर्न।
तस्विर सहि पंजीकृत गर्नका लागि यो आवश्यक छ लामो एक्सपोजर सेटिंग प्रयोग गर्नुहोस्। अर्को शब्दहरुमा, क्यामेराको शटर लामो समय (१० सेकेन्ड वा अधिक) को लागी खुला रहनु पर्छ, यसैले अधिक प्रकाश दिन्छ।
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ एक तिपाई प्रयोग गर्नुहोस् एक्सपोजर अवधिमा क्यामेराको स्थिरता सुनिश्चित गर्न।
सबै चीजको बाबजुद पनि, र ती सबै भिडियोहरू र फोटोग्राफरहरू कत्ति राम्रोसँग जान्छन्, हाम्रो टाउको माथि आकाशबाट चर्ने उत्तरी लाइटहरूको भूतिया बत्तीहरू अवलोकन गर्ने अनुभूतिसँग केही पनि तुलना गर्न सकिँदैन। एक अनुभव जुन तपाईंको जीवनमा कम्तिमा एक पटक रमाइलोको योग्य छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » डेनमार्कमा ओरोरा बोरेलिस